बीम ठाडो सुदृढ - माउन्ट सुविधाहरू
काठ, ठाडो प्रबलित, के नाम हो? काठ पोल। तिनीहरूले सजाय बाड लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा प्रयोग गर्न बन्द छैन। हामीलाई, जमीन मा स्थापना लग को सुविधाहरू विचार यस्तो समाधान को फाइदा र बेफाइदा निर्धारण गरौं।
काठ को विकल्प
काठ, ठाडो प्रबलित, लोड यसलाई धारण सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले धेरै महत्त्व जब काठ को एक उपयुक्त चयन छनौट।
अभ्यास शो रूपमा, सबै भन्दा टिकाउ र भरपर्दो भएको ओक डंडे छन्। बीच, सन्टी, हेजेल, मेपल मा संगठन आवेदन लग बार लागि राम्रो विकल्प protrudes। उत्तरार्द्ध तीव्र क्षय विषय हो जो एक अपेक्षाकृत नरम कोर, छ देखि धेरै, यस्तो काम र उर्वर पाइन काठ को कार्यान्वयन लागि उपयुक्त छैन।
फाइदा र नोकसान
काठ लग, ठाडो प्रबलित समय देखि, अतिप्राचीन बाड को निर्माण मा प्रयोग। थप प्रभावकारी विकल्प एउटा ठूलो को उपलब्धता भए तापनि यो समाधान यसको लाभ छ:
कम लागत र भौतिक उपलब्धता।
ह्यान्डलिङ र स्थापना को सुख।
को बार को निर्माण को लागि आधारको रूपमा काठ स्तम्भ को स्पष्ट बेफाइदा लागि, यो नै धातु संग तुलना प्राकृतिक वर्षा, कम लामो जीवन को प्रभाव को सामाग्री को संवेदनशीलता टिप्पण लायक छ।
ठाडो प्रबलित एक लग कसरी स्थापना गर्ने? यो प्रश्नको जवाफ निम्नानुसार छ:
स्ट्रिङ र कुन बेला लाइन बाड भविष्य निर्धारण गरिन्छ गरिन्छ इलाका, अंकन pegs प्रयोग सुरु गर्न।
थप ध्रुवों अन्तर्गत तयार deepening। मजबूती ठाडो प्रबलित को काठ, स्थापना गर्न, यो सामान्यतया बारेमा 70-80 सेमी को पिट गहिराई suffice हुनेछ।
सतह खुलने कस compacted।
प्रत्येक recess तल छत सामाग्री, चिस्यान प्रवेश विरुद्ध सुरक्षा रूपमा सेवा गर्नेछन् जो संग गलैँचा छ।
स्तम्भ सिधै स्थापना प्रदर्शन, जो तल्लो भाग पनि सामाग्री इन्सुलेट संग र्याप छ।
तयार ठोस को अन्त मा। को recesses नुनखरा भरिएका हुन्छन्।
बाड को स्थापना को लागि आधारको रूपमा, ठाडो प्रबलित लग, प्रयोग, यो विस्तार माटो वा ईटा युद्धमा को रूप मा fillers संग भर्न एक ठोस मिश्रण तयार छैन आवश्यक छ। वर्षा उजागर गर्दा यी सामाग्री एकदम तीव्र विनाश हुन सक्छ।
स्थापना समयमा आवश्यक भएको लग को तयार recess मा जैविक कुरा प्राप्त भएन भन्ने सुनिश्चित गर्न: जो पनि काठ rotting योगदान घाँस, twigs, पात,। यो हटाइ पानी भरिएका हुन्छन् माटो मा voids को गठन गर्न जान्छ। काठ डंडे को आधार मा प्रशस्त चिस्यान को ठहराव समर्थन विनाश कारण हुनेछ।
बाह्य नाली: उपकरण माउन्ट प्रविधि, सामाग्री
तल्ला screed उपकरण: सामाग्री, प्रविधि र कोसेढुङ्गामा
यस शवर कसरी इकट्ठा गर्न?
काठ प्रसारण टावर: फोटो, आकार, वजन। स्थापना र काठ डंडे को मरम्मत
आफ्नो हातले फ्रेम खलिहान: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
सुई: एक हिउँ घर निर्माण गर्न छ
कसरी घर मा मानिस bewitch गर्न। आफ्नो प्रेम जीवन आमन्त्रण
जहाँ स्थानीय आत्म-सरकार बनाइयो? zemstvo संस्थाहरू मा नियमहरु
एक क्रसटेड क्रसट बुनाई गर्न सिक्दै
गुगल क्रोम - प्लगइन को पतन
सीनेटर - यो हुनुहुन्छ? जो एक सीनेटर रूपमा कार्य गर्नेछ
रेनो Megan 2, समीक्षा र सुविधाहरू
ओरालो बाइक के हुन्?
कसरी बाथरूम मा मोल्ड को छुटकारा प्राप्त गर्न: व्यावहारिक सल्लाह
काठ मा प्लास्टर। किन आवश्यक छ?
मनोरञ्जन केन्द्र "सुदूर सुदूर टाढा राज्य" (पेस्कोभ क्षेत्र): समीक्षा, मूल्यहरू
लेजर द्वारा टाटु हटाउने